Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Etù IMEX na-ekpughe ihe nzuzo
Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
IMEX kpughere ihe nzuzo
N'ịgbaso ule gara nke ọma n'ọnwa gara aga, IMEX na -akpọ ndị bịaranụ BuzzHub ka ha sonye na "Gather Buzz Fest" na Gather.Town ikpo okwu iji gosi mmechi nke Oke Ọhụrụ Innovation Buzz ya na Wenezde, Julaị 7.
Nke a bụ nke mbụ a na -akpọkọta Buzz Fest - IMEX Buzz Day mgbe emechara oriri.
Gather.Town bụ ikpo okwu egwuregwu nwere nnukwu retro vibe na -echeta egwuregwu 80s arcade.
Ndị bịaranụ na -ahọrọ avatar, họrọ uwe, wee pụọ banye na dijitalụ a na -amaghị na desktọpụ ha.
IMEX's Gather Buzz Fest na-egosipụta ụlọ egwuregwu, ụlọikwuu ụlọ ezumike ihe ntụrụndụ mara mma, ọkụ ọgbụgba egwu, ogige ntụrụndụ na ịkwasa agwaetiti na-enweghị mgbawa. A na-akpọ ndị nwere nkịta ka ha weta pooch ha n'ezie na ihuenyo ka ndị na-egwu egwu nwere ike ịgba gburugburu ọkụ ọkụ. Enweghị ihe mgbakwunye, nbudata ma ọ bụ ngwa dị ka a na-achịkwa igodo site na iji akụ keyboard.
Ndị sonyere na mmemme Swapcard's Evolve Homecoming ga-esonyekwara Gather Buzz Fest dị ka akụkụ nke mmemme mmekọrịta obodo abụọ-nke mbụ maka ụlọ ọrụ ahụ.
Carina Bauer na -akọwa: “Dị ka akụkụ nke nkwa anyị ịnwale n'aha ụlọ ọrụ ahụ, anyị esorola Gather rụkọọ ọrụ. Anyị maara na ọ bụ ihe siri ike, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, imepụtaghachi ịdị adị nke ịbanye n'ime enyi ụlọ ọrụ na ndụ n'ezie mana nke a bụ ihe kacha nso anyị hụtụrụla, anyị na -agbakwa onye ọ bụla ume ịnwale ya. ”
The IMEX Kpọkọta Buzz Fest bụ njedebe nke ụbọchị Buzz ọzọ nke na -egosipụta ndị na -ekwu okwu na mmemme dabere na otu n'ime nkwa iri na abụọ IMEX - Innovation dị oke egwu. Ndị na -ekwu okwu gụnyere Christophe Debard, Onye isi Protospace, Toulouse; onye bụbu onye okike okike nke akwụkwọ akụkọ UK Grazia, Suzanne Sykes na Artist Light, Frankie Boyle. Mmemme ụbọchị ahụ na -enyekwa ohere ma obodo Evolve na IMEX isonye na nnọkọ crossover, na -egosipụta ọchụnta ego na onye ode akwụkwọ, Cris Beswick, na 'Iwulite Omenala nke Innovation'.
Gather Buzz Fest na -ewere ọnọdụ na njedebe ụbọchị Buzz na 7 Julaị. Debanye aha maka ụbọchị Buzz - n'efu - Ebe a.
IMEX BuzzHub na -agba ruo Septemba na -ebuga njikọ mmadụ, ọnụ ahịa azụmaahịa yana ọdịnaya ahaziri na 'Road to Mandalay Bay' na -aga IMEX America, 9 - 11 Nọvemba, na Smart Mọnde, nke MPI kwadoro na 8 Nọvemba.
#IMEX21 na #IMEXbuzzhub
Ndị oji egbe tọọrọ ndị mbịarambịa n'ụlọ nkwari akụ Mexico ...
Ndị Taliban na -eweghara ike nke Kabul Hamid ...
Hawaii Visitors na-emefu ijeri US $ 1.44 Ma n'okpuru ...
Ọdụ ụgbọ elu Moscow Sheremetyevo na-emepụta Ngwọta Ọhụrụ maka ...
Dekọọ ọchịchọ maka ụgbọelu Jet nke onwe na-aga n'ihu n'ihu ...
Phuket Sandbox: UK na-eduga na nlọghachi nke ndị njem Europe ...
Minista njem nlegharị anya nke Seychelles na -enyocha obere ...
Zanzibar International Film Festival na Boost Island ...
Canada imeghe oke maka ndị njem ọgwụ mgbochi zuru ezu
Russia na Namibia anaghị aga visa
COVID-19 na-agbanwe omume njem ndị Italiantali
Delta dị iche iche na-agbasa na Hawaii dị ka ndị njem 30,000 ...
Iizọ njem nlegharị anya nke Hawaii na-emeghe
Mmadụ 4 nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu Connecticut